Ithegi: ukufikelela kubloga | Martech Zone
Ithegi: ukufikelela kubloga
GroupHigh: Uphando kunye nokuKhangela iBlogger yakho yokufikelela
NgoMvulo, nge-3 kaDisemba ngo-2018 NgoMgqibelo, Disemba 8, 2018 Douglas Karr
Umlingane uChris Abraham wabhala malunga nesisombululo sokufikelela kubhlog ekuthiwa yiGroupHigh. Iqonga le-Intanethi leGroupHigh libonelela ngazo zonke izinto ozifunayo ukuze ufikelele kublogi. IqelaHigh likwenza ukuba ufumane iibhlog ngokulula kwimikhankaso yakho yokufikelela kubakhangeli bebhlog yexesha lokwenyani kunye nembonakalo yokuhluza. Idatha ibandakanya izihloko, ukwenziwa kwendawo, ulwazi lwebhlog, iiakhawunti zentlalo, idatha yomlandeli kunye nomlandeli, igunya lokukhangela izinto eziphilayo (ezivela eMoz) kunye nezibalo zendlela ezivela kwiCompete.com nakwi-Alexa. Iqonga livumela abasebenzisi ukuba bafumane, balandele kwaye
Yonke imihla ndifumana inqwaba yeepaki kwibhokisi yam engenayo. Uninzi lwazo alubhalwanga kakuhle, uninzi aluchaphazeli indawo yam, kodwa kuhlala kukho igolide kwimfumba ye-PR spam ukuze ndinike ingqalelo. Ndifumene isandi kule veki apho i-imeyile ibonakale yahluke kakhulu kwaye yandinika amava endlela. Ndiyalithanda eli thuba lokwazisa inkampani yobudlelwane noluntu kwelinye icala
Kuba sibekwa ziingcali zonxibelelwano noluntu mihla le, siya kubona ezona ndawo zintle nezona zibi zokufikelela kwi-imeyile. Siye sabelana ngaphambi kokuba sibhale inow esebenzayo kwaye le infographic yinto elungileyo yokulandela ebandakanya inkqubela phambili enkulu. Inyani yile yokuba iinkampani kufuneka zakhe ulwazi kunye negunya lophawu lwabo kwi-intanethi. Ukubhala umxholo akwanelanga, ukukwazi ukufaka umxholo omkhulu kwaye kwabelwane ngawo